Tag: facebook yakaita-kuchera | Martech Zone
Tag: facebook senge-kuchera
Trumpia: Yese-In-Imwe Kushambadzira
Chipiri, February 4, 2014 Svondo, Kukadzi 2, 2014 Douglas Karr
Trumpia inopa yese-mu-imwe yekushambadzira suite iyo inosanganisira mbozha mameseji, kushambadzira email nevezvenhau kushambadzira, kutepfenyura kwezwi uye meseji yekutumira. Pamusoro pezvo, iyo system ine mafirita anehungwaru, zvine simba zvinongedzo, manejimendi manejimendi, coupon uye yakasimba robhodhi API. Inogona zvakare kunyorwa! Iyo Trumpia chikuva chiteshi-chiteshi chakashambadzira suite inoshandiswa kuunganidza, kutumira meseji, kuita uye kusimudzira zvaunopa kuburikidza nefoni, email uye zvemagariro media. Ivo vanopa akati wandei maficha mukati mega zano: Unganidza